कांग्रेस नेता शाहीले गरे सरकारी गाडी फिर्ता
सुर्खेत । जताततै सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको समाचारहरु आईरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने सरकारले सुविधाका लागी दिएको सरकारी गाडीनै फिर्ता गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत रहेका जीवनबहादुर शाहीले सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका हुन् । सञ्चार माध्यममा गरिब
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । कोरोनाबाट नेपालमा थप एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । पाल्पाको पूर्व खोला गाँउपालिकाका एक पुरुषको कोरोनबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै कोरोनबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जेठ २० पाल्पास्थित
बैतडीको भटना क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएकी युवतीको कोरोना रिपोट नेगेटिभ
बैतडी । पुर्चौडी नगरपालिका–४ भटनास्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएकी युवतीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । पञ्जाबबाट परिवारसहित आएकी २२ वर्षीया सुनिता लुहारको मंगलबार मृत्यु भएको थियो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि क्वारेन्टाइनमै राखिएको उनको शव आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ
गण्डकी प्रदेशमा थप १६ जनामा कोरोना
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा १६ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनमा गरिएको परीक्षणमा थप १६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका ३३ वर्षीय महिला, २२ र २९ वर्षीय पुरुष, बडिगाड गाउँपालिकाका १२, २०, २१ र २५ वर्षीय
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेकाले अब अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चु जी फाउण्डेशनको पहलमा हेल्थ इन्भ्याइरोन्मेन्ट एण्ड क्याइमेट एक्सन
काठमाडौँ। देशभर थप २ सय ८८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित मध्ये २ सय ७० जना पुरूष र १८ जना महिला रहेका छन् । योसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या २ हजार ९९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार मंगलबार
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट १८ डिस्चार्ज
धरान/वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत १८ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । अस्पतालका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाका अनुसार डिस्चार्ज हुनेमा १७ जना झापाका हुन भने धरानकी एक महिला छन् । दुई पटक पिसिआर जाँच गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको हो । उनीहरुलाई
बैतडीको भटनामा २२ बर्षीय युवतीको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु
बैतडी । बैतडीको पुरचौडी नगरपालिकाको वडा नं ४ को क्वारेन्टाइनमा एक २२ वर्षीय युवतीको मृत्यु भएको छ । वडाध्यक्ष शैलेन्द्र धानुकका अनुसार उनलाई केहीदिन अघि भारतबाट उद्धार गरेर ल्याइएको थियो । उनको मंगलबार बिहान ५ बजे मृत्यु भएको हो । मृतक सुनिता लुहार मुटु रोगबाट पीडित रहेको र उनको स्वाव परीक्षण गरिने बताइएको
१३ जना कोरोना संक्रमित थपिए,कुल संख्या १ हजार ८ सय ११
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेटमा थप १३ जना कोरोना संक्रिमत पुष्टि भएका छन् । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीको रिपोटमा १३ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरू पाल्पाका २ जना,नवलपरासीका ६ वर्षीय बालक,गुल्मीका १ जना,कपिलवस्तुका ७ जना र रुपन्देहीका
२ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,कुल संख्या १ हजार ७ सय ९८
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ७ सय ९८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा सोमबार थप २ सय २६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सो संख्या पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले यो अहिलेसम्मकै धेरै संख्या भएको जानकारी दिए । संक्रमित
कर्णालीमा ७५ जनामा कोरोना,कुल संख्या १९८
वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा थप ७५ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर १९८ पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रलायको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी १९८ जना कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । संक्रमित हुनेमा दैलेखमा सबैभन्दा वढी ४१ जना
कोरोनाबाट आठ जनाको मृत्यु,बाजुराकी दुई वर्षीय बालिका मृत्यु कोरोनाबाट भएको पुष्टि
काठमाडौं । बाजुराकी दुई वर्षीया बालिकाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बालिकाको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारणले भएको जानकारी दिएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ
१ सय ६६ जनमा कोरोना,संक्रमितको संख्या १ हजार ५ सय ६७ पुग्यो
काठमाडौं । देशभर थप १ सय ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विभिन्न प्रयोशालाको पछिल्लो रिपोट अनुसार १६२ जना पुरुष ४ जना महिलामा कोरोन संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या १ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ । संक्रमित हुनेमा तनहुँका १ जना, स्याङ्जाका २ जना, पर्साका
डडेल्धुरा । डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पस क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका ६ वर्षीय बालकलको मुत्यु भएको छ । शनिबार राती मृत्यु भएपछि उनको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छ । गौरी फन्टा नाकाबाट उद्धार गरी शनिबार राति १२ बजेतिर डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसको ल्याइएका बालकलाई शारीरिक समस्या देखिएपछि विहान
काठमाडौँ । देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा १ सय ८९ जना संक्रमित पाइएका छन् । नयाँ थपिएका १ सय ८५ पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन् । योसँगै संक्रमितको संख्या १ हजार ४ सय १ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिएका
१७० जना थपिएपछि कोरोना संक्रमित १ हजार २ सय १२
काठमाडौं । देभभर थप १ सय ७० जनामा कोराना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २४ घण्टाको अपडेटमा यतिका संख्यामा संक्रमित पुष्टि भएका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले देशका विभिन्न प्रयोगशाला रिपोट अपडेट गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । योसँगै संक्रमित हुनेको संख्या १
भद्रपुर-झापाका १५ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी कचनकवल गाउँपालिका नागरिकमा कोडिभ–१९ का सङ्क्रमण भटिएको छ । जिल्लामा रहेका ७९ सङ्क्रमितमध्ये ७३ कचनकवल गाउँपालिकाका रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बिहीबार मात्र कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालामा गरिएको
एकैदिन १५६ जना थपिएपछि कोरोना संक्रमतिको संख्या १,०४२
काठमाडौं । देशभर थप १ सय ५६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ४२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्यालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा भएका परीक्षणमा १ सय ५६ जना थपिएको जानकारी दिए । संक्रमित मध्ये
जेठ १५, बाँके । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाभर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ सरुवा भएर आएकै दिन जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट बुधवार रातिदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । सुरक्षा समितिले बुधवार राति १० बजेदेखि
हेटौँडा - वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोनासँग डराएर ढोका थुनेर वा लुकेर मात्र नहुने भन्दै त्यसविरुद्ध जुध्ने र सामना गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिइने बताए छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उहाँले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिदै कोरोनाविरुद्धको
पहिलो पल्ट एकै दिन ११४ जनामा कोरोना,संक्रमितको संख्या ८८६
काठमाडौँ । देशभर थप १ सय १४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ८ सय ८६ पुगेको छ। एकै पटक यतिधेरै संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिएको यो पहिलो हो । उनीहरू सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियममित पत्रकार सम्मेलनमा
काठमाडौँ । देशभर थप ९० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अपडेट अनुसार सोसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सय ७२ पुगेको छ । मन्त्रालयको नियममित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा
वीरगञ्ज । मृतकको पिसिआर रिपोट नआउँदै शव दिएको भन्दै वीरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान थालिएको छ । कोभिड–१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख एवम् पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमाथि थप अनुसन्धान
वीरगञ्ज । मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण वढेसँगै कोरोना पराजित गरेर निको हुने पनि थपिएका छन् । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट चार महिने शिशुसहित एकै परिवारका १८ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । दुई पटक स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको नारायणी अस्पतालका प्रमुख
थप ७२ जनामा कोरोना,संक्रमितको संख्या ६ सय ७५ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा थप ७२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार योसँगै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ सय ७५ पुगेको छ । देशको विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा ती संक्रमित पाइएका हुन् । संक्रमित हुनेमा धनुषामा ३ , कपिलवस्तुमा ३, काठमाडौंमा ३, बारामा २,
थप १९ जनामा काृेरोना,संक्रमितको संख्या ६०३ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा थप १९ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ६०३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, रुपन्देही, काठमाडौ, कपिलबस्तु, गुल्मी र नुवाकोटका गरी १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका
काठमाडौं । शनिबार दिउँसो थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा थप संक्रमितबारे पुष्टि गरेका हुन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५८४ पुगेको छ । शनिबार बिहान मात्र ३२ जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा थप कडाइ गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न अत्यावश्यक कामबाहेक उपत्यका आवागमन पूर्ण सिल गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपत्यकाका १८ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको छ । उक्त निर्णयको बुँदा नं २ मा उपत्यका
काठमाडौँ । सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक प्रयोगमा ल्याएको छ । बुधबार दिउँसो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् । नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल